Kenya oo ka baxday kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ | Xorriya Online
Home Caalamka Kenya oo ka baxday kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ
Dowladda Kenya ayaa ka baxday kiiska dacwadda badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya, kaasi oo qorshaha uu ahaa in maalinta berri ah uu dhageysigiisa ka billowdo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda [ICJ], waxaa sidaas weriyey wargeyska Daily Nation.
Iyaddoo ay noqoneyso tallaabadaan mid lama filaan ah, sannadkii 2019, kiiska ayaa laba jeer dib loo dhigay waxayna Nairobi ku guuleysatay inay mar saddexaad dib u dhigto bishii Maarso 2020, laakiin maxkamadda ayaa diiday inay mar afaraad dib u dhigto sannadkan, iyadoo ku doodeysa in arrimaha ay Kenya soo gudbisay aysan ahayn “kuwo muhiim ah”.
Wararku waxay hadda tilmaamayaan in Nairobi aysan ka qeyb geli doonin dood afeedka Isniinta, halkaasoo maxkamadda ay darafyadda siisay fursadda siman taas oo u oggolaan laheyd labada dhinacba inay madasha ku soo bandhigaan caddeyn la taaban karo.
ICJ ayaa todobaadkii la soo dhaafay soo saartay jadwal socon doona ilaa Arbacada todobaadka dambe, laakiin bixitaankii ugu dambeeyay ee Kenya waxay noqoneysaa dharbaaxo weyn. Soomaaliya iyo Kenya midkoodna war kama soo saarin talaabooyinkii ugu dambeeyay.
Balse, kormeerayaasha ayaa sheegaya in maxkamadda ay u badan tahay inay sii wadi doonto dhageysiga. In kasta oo jadwalka uu hadda yahay labada dal, haddana dhageysiga ayaa loo gaabin doonaa kooxda Soomaaliya si ay u soo bandhigaan dacwaddooda, taasi waxay ku xirnaan doontaa illaa Kenya ay gaarto go’aan daqiiqadii ugu dambeysa oo ah in ay bedesho mowqifkeeda kana qeybgasho.
Xitaa haddii Kenya aysan ka qaybgalin dhegeysiga dood afeedka, waxay noqoneysaa wax aan horay loo arag, sidda ay aamisan yihiin goobjoogayaashu; sababta oo ah waxaa jira kiis hore una dhaxeeyay Shiinaha iyo Filibiin kaasoo dhageysiga afka ah uu ka dhacay inkastoo labada dhinac midkood uu ka baaqsaday fadhiga.
Marka dhageysiga u qabsoomo Asbuucaan sidii loo qorsheeyay, waxay qaadan doontaa ugu yaraan 4-6 bilood oo kale ka hor inta maxkamaddu aysan go’aanka kama dambaysta ah gaarin. Tani waa sababta oo ah garsoore kastaa uu ugu baahan yahay inuu haysto wakhti uu kaga baaraandego kiiska kuna saleeyo dood iyo caddeyn uu kusoo bandhigo fadhiga loo balansan yahay.